ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-11 Julayi 2019	• 13 Amazwana
Ukuvakashelwa okuphelele: 10.828.376
Ikhamera ne-chip chip yobuchopho kwenza abantu abayizimpumputhe babone futhi!
Inhlekelele yomoya ye-MH17: yini enye esingayikholelwa?
UMartin Vrijland op Sizoletha kanjani ushintsho olukhulu uma i-99% ingaphili?
Mindsupply op Sizoletha kanjani ushintsho olukhulu uma i-99% ingaphili?
SandinG op Sizoletha kanjani ushintsho olukhulu uma i-99% ingaphili?
Joyina abanye ababhalisile abangu-1.611